Waxaan helay foomka su´aalo baadhitaan ah
Waa maxay Nationell Patientenkät (Foomka Su´aalaha baadhitaanka Bukaan socodka)
Halkan ayaad kaga jawaabaysaa foomkaaga su´aalaha baadhitaanka
Waad ku mahadsan tahay intaad ka qeyb qaadnayso horumarinta caafimaadka-iyo daryeelka caafimaadka
Hadda waxa socda baadhitaan qiyaasaaya dareenka bukaan socodka ee daryeelka. Baadhitaanka waxa uu ka soconayaa wadanka oodhan iyada oo taas si bakhtiyaa nasiib ah laguu soo doortey, maadaama aad dhawaan soo booqatey caafimaadka-iyo daryeelka caafimaadka. Ujeedada waxa weeye si loo qimeeyo daryeelka siday bukaan socodku u arkaan iyo si loo helo qeybaha ay jirto in wax laga wanaajin karo.
Baadhitaanka waxa sameynaysa CMA Research iyadoo qandaraas ka haysata Kamuunada iyo Gobolada Iswiidhan.
Ka qeyb qaadashadaadu waa muhiim
Waxaad dareeyamso ayaa tirada lagu darsanayaa, sidaas daraadeed ayay muhiim weyn u tahay inaad adigu ka qeyb qaadato baadhitaanka. Ka qeybqaadashada dadku haddii ay badato waxay taasi na siinaysaa sawir runta uga sii dhow oo daryeelka, taas oo keenaysa saldhig wanaagsan oo waxqabadka wax lagaga sii wanaajiyo.
Macluumaadkaaga waa la ilaalinayaa
Dhamaan ka qeyb qaadashada baadhitaanku waa mid xor loo yahay. Wax natiijo ahi marna shakhsiga looguma soo tixraaci karro. Baadhitaanka waxa loo sameynayaa sida waafaqsan xeerka macluumaadka shakhsiga iyo tilmaamaha anshaxa xirfada.
Qofka ah daryeel bixiye ee helay inuu ka qeyb qaato
Baadhitaanka su´aalaha waxay ku socdaan qofka ay carruurtiisu dhamaan booqdeen caafimaadka-iyo daryeelka caafimaadka. Maadaama uu ilmahu ka yaryey 15 sanno ayay tahay daryeel bixiyaha cida ka jawaabeysa foomka su´aalaha baadhitaanka, haddii ay suurto gal tahay wadajir ilmaha. Haddii aanad la socon boqashada ayaa foomka su´aalaha uu ka jawaabayaa qofka la socdey ilmaha xiliga booqashada.
OHaddii aad su´aalo qabto fadla la soo xidhiidh CMA Research
Telefoonka lacag la´aanta: 08-80 62 02, maalmaha shaqada saacada 8-17.